Ny fiantraikan'ny fitantanana ny fananana nomerika amin'ny fitantanana atiny | Martech Zone
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha, efa niresaka momba izany isika Inona no atao hoe Digital Asset Management, Maninona ny Digital Asset Management no manakiana ny marketing amin'ny ankapobeny, ary koa Ahoana ny fanamarinana ny fandaniana amin'ny fitantanana ny fananana nomerika. Amin'ity fampahalalana avy amin'i Widen ity dia manazava ny antsipirian'ny fomba izy ireo fitantanana fananana nomerika dia hanampy anao hametraka mahomby kokoa fitantanana votoaty tetika.
Raha ny tena manokana, ny fametrahana sy fanaraha-maso ny atiny ao amin'ny toeram-pivarotana afovoany dia mahomby kokoa noho ny fananana atiny niparitaka nanerana ny mailaka, mpizara, sy ny toeran-kafa. Ny fanananao dia mora tadiavina sy azon'ny olona rehetra tadiavinao. Azonao atao ny manara-maso ny fampiasana sy mamerina mamerina ny haino aman-jery efa misy. Azonao atao ny mampihatra ny fizotrany handinihana sy hankatoavana, hanafainganana ny fizotry ny famoahana. Ary ny ankamaroan'ny fahalavoana, ny fitantanana ny fananana niomerika dia ahafahan'ny orinasa mahazo fifehezana bebe kokoa amin'ny kinova momba ny atiny, torolàlana marika, fahatapahan'ny fananana ary fameperana fampiasana.
Amin'ity sary ity dia asehonay fa tsapan'ny mpivarotra mahomby fa tena ilaina tokoa ny atiny nomerika sy ny hakingan-karena. Ny antony? Ny varotra atiny dia voaporofo fa mpamily fitarihana tsy azo resena, fanentanana amin'ny marika, fifandraisan'ny mpanjifa ary ROI.
Tags: dingana fankatoavanafidirana amin'ny fanananaFitantanam-panananatahiry fitahirizana harenafanaraha-maso ny marikafitantanana votoatyfanovana atinytohodranon'ifitantanana fananana nomerikafanarahana ny fampiasana atinyhihamalalaka